Mfe Nyefee SMS si iPhone
Otú nyefee SMS si iPhone ka Android
Dị nnọọ zụtara Samsung Galaxy S6 Edge +. Olee otú m nwere nyefee SMS ozi site na m iPhone 5 ka ọhụrụ m Galaxy S6 Edge +? Daalụ nke ukwuu.
Get a onwunwu Android ekwentị ma ọ bụ ika-ọhụrụ iPhone, dị ka iPhone 6s (gbakwunyere)? Inwe ọchịchọ siri ike nyefee SMS si ochie iPhone na ya? Ka idetuo SMS si iPhone mfe, ụzọ kasị mma bụ ịchọta a thrid ọzọ ngwá ọrụ na-eji na-nyefee data n'etiti igwe. Ebe a, m ike ikwu na ị a ekwentị transfer ngwá ọrụ, ya bụ, Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-enyere gị aka kpọmkwem ịkpali SMS, gụnyere otu ndị gị iPhone na Android ekwentị na ndị ọzọ na iDevice.
iPhone SMS transfer atọ nzọụkwụ
Ibudata ngwá ọrụ a na-eso na-esote nkuzi ime SMS nyefe. Ndị na-esonụ screenshots bụ banyere ibuga SMS si iPhone ka Android ekwentị na Windows version. Nzọụkwụ ndị dị nnọọ yiri mgbe you'r na iji Mac version.
Nzọụkwụ 1. Run MobileTrans on PC
Firstly, ị kwesịrị ị na-agba ọsọ MobileTrans on PC mgbe ị rụnyere ya. Mgbe ahụ, bụ isi window ga-egosi na PC. Pịa Malite. Ịkwaga SMS si iPhone na MobileTrans n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị kwesịrị ị na wụnye iTunes na kọmputa gị.
Cheta na: Wondershare MobileTrans arụ ọrụ nke ọma na iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na Android / ọzọ iDevice
Nke abuo, jikọọ gị ngwaọrụ abụọ ka PC site na eriri cables. MobileTrans Ga chọpụta ha ozugbo ka ha na-ejikọrọ. Tinye akà rà Doro Anya data tupu oyiri efu gị iPhone si SMS igbe. Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa ya, dị nnọọ ka ọ na-naanị ya.
Cheta na: Pịa tụgharịa ịgbanwe ebe gị isi iyi na ekwentị na ebe otu mgbe ị kwesịrị.
Nzọụkwụ 3. Nyefee SMS si iPhone ka Android / iOS ngwaọrụ
iPhone ka Android transfer: kọntaktsị, kalinda, ederede ozi, videos, music na foto nwere ike bufee.
iPhone ka iDevice: ederede ozi, kọntaktsị, kalinda, videos, music na foto nwere ike depụtaghachiri.
Iji nanị transfer SMS, ị kwesịrị uncheck akara tupu ndị ọzọ kwekọrọ ekwekọ ihe. Wee pịa "Malite Copy" na-amalite nyefe. Na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ oge niile. Mgbe ọ na-okokụre, see "OK".
Olee otú Ị kpọghee ekwt iPhone mere na ọ ga-eji na ihe ọ bụla SIM Kaadị
Esi iPhone Ndi ana-akpo si iTunes enweghị iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Olee otú iji tọghata M4V ka iPhone (The ọhụrụ iPhone 6s / 6s Plus gụnyere)
> Resource> iPhone> otú nyefee SMS si iPhone